Flash video downloader: Download Flash video in click ah
> Resource > Video > Sida loo Download Flash Video ka Shabakadaha
Flash video, ee ah qaabab ka mid ah .flv iyo .f4v, hadda waa caadiga ah ee online videos gundhig in inta badan Websiteyada video caan ah sida YouTube, Hulu, VEVO iwm Marka riyaaqayaa daawashada kala duwan videos online, waxaa jira fursad aad soo gaarto qaar ka mid ah videos xiiso leh oo aad doonayso inaad kala soo baxdo si ay u sii at faraha aad. Laakiin si aad niyad jab, degsado flash video ka websites had iyo jeer waa dhibaato weyn. Hadda, fadlan dhididka ma at dhan, halkan waxaan ku siiyaan awood flash video downloader- Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ). Barnaamijkan wuxuu ka dhammaan websites video geeyo caadi ah kala soo bixi kartaa videos kaliya click ah. Waxaad kaloo isticmaali kartaa barnaamijka si loo caawiyo maaraynta iyo ciyaaro videos on your computer. Aan sii quusin oo raac tutorial ka faahfaahsan oo ku saabsan sida loo soo bixi flash videos hoos ku qoran.
Iska dhan diyaarisay ka hor si tutorial ah. Download barnaamijka sida ay your computer iyo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Orod barnaamijka oo eegno deg deg ah ee ay interface si fudud loogu talagalay. Waxaan doonaa qaadan version daaqadaha tusaale ahaan.
1 Raadi videos flash aad jeceshahay
Burcad browser ah oo taga si YouTube.com ama websites kale geeyo video. Markaas raadiyo video aad rabto. Fur video ay ku ciyaaraan.
Fiiro gaar ah: Barnaamijku waxa uu taageeri karaa saddex daalacashada ugu weyn sida IE, Firefox iyo Chrome.
2 Download flash videos in click ah
Video ayaa ka sii ciyaaro iyo waxaad arki doontaa in ay jirto button Download a muuqday markii dhibcood mouse si aad u xaq u top of screen video ah. Haa, waxaa guji iyo barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi video isla markiiba.
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aadan rabin in aad furto video ka dibna soo bixi. Haa, waxaa barnaamijka sidoo kale awood u aad kala soo bixi videos nagoo url video oo riixaya badhanka paste URL barnaamijka.
Tani waa dhamaadka degsado flash video. Waxaad sii wadi kartaa in aad raadiso videos kale oo cajiib ah oo raac talaabooyinka ku xusan. Barnaamijkan kala soo bixi kartaa 5-10 videos isku mar.
3 Beddelaan videos flash ah (optional)
Marka dajinta ka baxayo, waxaad ka heli kartaa videos ee maktabadda soo bixi. Haddii aad u malaynayso in ay tani tahay dhamaadka, waxaa laga yaabaa inaad qalad ah. Waxaa laga yaabaa in videos bixi aan ka ciyaari karaa qalabka aad la qaadi karo sida iPad, ama iPhone 5. Ha welwelina, waxaad si fudud u gaadhi karaa oo keliya adigoo gujinaya Beddelaan on xaq u of item video iyo xulashada qalab bartilmaameed la qaadi karo sida wax soo saarka format.
Marka laga reebo diinta, waxaa barnaamijka sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro video ah ay ciyaaryahan hidi iyo maarayn video files on your computer iyadoo la dhoofinayo barnaamijka. Sidaas, hana ka baqan in ay isku day ah. Marna aad hoos ku dayn doonaa.